Mourinho oo LABO eray kaliya isaga difaacay saxaafada, kadib markii laga ceyriyay shaqada Manchester United – Gool FM
(Manchester) 18 Dis 2018. Tababaraha reer Portugal ee Jose Mourinho ayay qabteen kaamiriyoonka, kadib dhowr saacadood markii ay Manchester United ku dhawaaqday in ay shaqada ka ceyrisay, sababa la xiriira natiijooyin xumo ay kooxda la kulantay.
Kaamiriyoonka warbaahinta ayaa waxay soo bandhigeen Mourinho oo ka dhaqaaqaya Hotelka uu ka daganaa magaalada Manchester tan iyo markii uu qabtay shaqada tababarka ee Red Devils.
Mourinho oo ay murugo ka muuqatay wejigiisa ayay saxaafada isku dayday in ay su’aalo ka weydiiso shaqa ka ceyrintii lagu sameeyay.
Laakiin macalinka reer Portugal oo si weyn kaga soo hor jeeday inuu wax faafaahin ah ka bixiyo casilaadiisa ayaa wuxuu yiri oo kaliya: “Kulanti dambe saaxiibayaal”.
Si kastaba Mourinho ayaa wuxuu ku noolaa mudada uu macalinka ka ahaa Manchester United mid ka mid ah hoteelada ugu qaalisan magaalada Manchester, waxaana halka habeen ku bixi jiray qiimo gaarsiisan $600.
“Messi wuxuu in badan ka sareeyaa Ronaldo” - Javier Tebas oo dhulka ku jiiday Cristiano
Santiago Solari oo ka hadlay wararka ku aadan in Mourinho uu markale ku laabanayo Real Madrid